Tonga any Costa Rica ny kaonferansa momba ny planeta, ny olona, ​​ny fandriampahalemana (P3) amin'ny herinandro ho avy
Home » Travel Associations News » Tonga any Costa Rica ny kaonferansa momba ny planeta, ny olona, ​​ny fandriampahalemana (P3) amin'ny herinandro ho avy
Oktobra 5, 2017
Costa Rica dia vonona hampiantrano fanontana vaovao an'ny olo-malaza Konferansa iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany maharitra: planeta, vahoaka, fandriampahalemana (P3), izay atao ny 9-11 Oktobra ao San José, renivohitry ny firenena. Ny forum, izay hatrehan'ny sekretera jeneralin'ny World Tourism Organization (UNWTO) Taleb D. Rifai, dia manamafy ny toerana misy an'i Costa Rica ho mari-pahaizana amin'ny fizahan-tany maharitra maharitra eto amin'izao tontolo izao.
Ny andiany fahenina amin'ny Fihaonambe P3 dia mandray ireo mpandraharaha iraisam-pirenena 25 sy mpitarika manerantany, ao anatin'izany ny mpanolotsaina stratejika manerantany Anita Mendiratta sy Shannon Stowell, Adventure Travel Trade Association (ATTA), miaraka amin'i Andriamatoa Rifai. Ny tanjon'ny hetsika mandritra ny telo andro dia ny fifanakalozana fahalalana sy traikefa ary hamoronana tetikasa vaovao izay manolo-tena amin'ny faharetana, na amin'ny lafiny tsirairay na amin'ny fiaraha-monina.
Ny fihaonambe tamin'ity taona ity dia nianjera tamin'ny Taona Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany maharitra ho an'ny fampandrosoana - I Luis Guillermo Solís, filohan'ny Costa Rica, dia notendrena ho masoivoho manokana an'ny UNWTO ho fankasitrahana ny asan'ny mpisava lalana amin'ny firenena amin'ny fizahan-tany maharitra. Raha raisina ho "fomba fiaina", ny fomba fitandroana ny faharetana dia hita any amin'ny faritra rehetra any Costa Rica, raisin'ny olom-pirenena rehetra ary eken'ny mpitsidika.
Ny fitohanana dia singa iray lehibe ihany koa ho an'ny Birao fizahan-tany Costa Rica (TIC), izay ny maodelin'ny fampandrosoana maharitra fizahan-tany dia nahatratra ny fankatoavana eran'izao tontolo izao. Saika ny herinaratra any Costa Rica dia novokarina avy amin'ny loharano azo havaozina. Ankoatr'izay, ny firenena Amerikana afovoany, izay mirehareha amin'ny 5% amin'ny zava-manan'aina an'izao tontolo izao, dia mikendry ny ho tonga firenena tsy miandany amin'ny karbaona voalohany amin'ny 2021.
Mauricio Ventura, minisitry ny fizahan-tany any Costa Rica, dia nilaza fa: “Ny fihaonambe P3 dia hetsika lehibe iray hanehoana an'izao tontolo izao ny maodelin'ny fampandrosoana maharitra momba ny fizahan-tany izay naroson'i Costa Rica nandritra ny telopolo taona lasa izay. Voninahitra lehibe ihany koa ny fananana Atoa Rifai, solontenan'ny fizahantany tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. Manantena ny handray azy any Costa Rica daholo isika rehetra. ”
Ny Konferansa P3 dia hatao ao amin'ny Real Intercontinental Hotel ary karakarain'ny Birao Fizahan-tany Costa Rica (TIC) sy ny Chambre Ecotourism et Sustainable Sustainable (CANAECO) Costa Rica. Ireo fanontana dimy lasa izay dia nanangona mpandray anjara maherin'ny 1,100 sy manam-pahaizana mihoatra ny 100 avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Notendren'ny Pentahotels ho filoha lefitra i Peter Habelitz
Fanambarana momba ny fitsangatsanganana vonjy maika any Vietnam ao amin'ny seranam-piaramanidina Noi Bai